September 2016 - Myanmar News Plus
ဝက်ခြံရှိသူတွေ စားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး
ဝက်ခြံရှိသူတွေ အမြဲစားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁ – ဆနွင်း ဝက်ခြံကို ကုသရာမှာ ဆနွင်းက များစွာအကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်လည်း ကျစေပါတယ်။ ဝက်ခြံအဖြစ် ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ အရေပြားပေါ်က ပိုးမွှားတွေ၊ အဆိပ်တွေကိုပါ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ၂ – မုန်လာဥ မုန်လာဥနီမှာ ဗီတာမင် အေ ပါပါတယ်။ မုန်လာဥနီစားခြင်းဟာ ဝက်ခြံကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ၃ – ငါး ငါးမှာပါတဲ့ အိုမီဂါ ဖက်တီးအက်ဆစ်နဲ့ ပရိုတင်းဟာ အရေပြားက collagen တွေကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၄ – အရွက်စိမ်း အရွက်စိမ်းတွေကိုလည်း စားပေးသင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကို သန့်ရှင်းစေပါတယ်။ ဗီတာမင်အေလည်း ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဝက်ခြံကို တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ Photos & […]
၀က်ခြံကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်ဖို့ လူတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ရုပ်မလှရင်နေပါစေ မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံ၊အဖုအပိန့် လေးတွေကင်းစင်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေမှာပါ။ ၀က်ခြံနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့အယူအဆ၊ ကုသပုံကုသနည်းတွေ ကြောင့် ၀က်ခြံဟာ အမြစ်ပြတ်ခြင်း မရှိဘဲ ရောဂါ တစ်ခုလို ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသာမက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Shwemom ပရိသတ်ကြီး ကျန်းမာလှပစေဖို့ ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ပြပေးနေရာမှ အခုတခါ ၀က်ခြံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေပြားဆရာဝန်တွေ အကြံပြုထား တဲ့ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်နဲ့ကုပ်ဖဲ့ခြင်း၊ဆွခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့ ၀က်ခြံ ဖြစ်ပြီဆိုရင် စတင်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း အဲဒီနေရာက နီမြန်းနေတာမျိုး၊ အရေပြားက စူထွက်နေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါ တယ်။ မျက်နှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ရဆိုးတဲ့အပြင် နာကျင်မှုကိုပါခံစားရပါတယ်။စူထွက်နေတဲ့ နေရာကို ကုပ်ဖဲ့ တာမျိုး၊ အထဲမှာရှိတဲ့ အဆီခဲထွက်သွားအောင် […]
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြောပြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မငြင်းပယ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားရဲ. ပုံစံ
အများသိပြီးသား အချက်တစ်ခုကတော့ ပုံမှန်ကြည့်လို့ကောင်းပြီး ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လှုပ်ရှားပြောဆိုတက်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ စော်ကြည်တယ်ဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး ။ ဒါကို သက်သေပြဖို့ အချက်တွေ ပေါ်လာပါပြီ။ Psychological Science နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာမှု စာတမ်းတွေအရ ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ရုပ်ရည် ချောမောခြင်း မချောမောခြင်းက အရေးမကြီးပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရှေ.မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိခြင်းက ပုံမှန်ထပ် ကောင်မလေးတွေကို ချဉ်းကပ်ရမှာ အောင်မြင်မှု ရှိစေပြီး ၊ ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာတော့ အမျိုးသား ၉၆ ယောက်နဲ့ အမျိုးသမီး ၁၀၃ ယောက်တို့ ပါဝင်ပြီး အချင်းချင်း ချိန်းဆို ပိုးပန်းစေခံတာပါ ။ ရလဒ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု […]
ပျိုမေတို့ရေ ဒီတခါတော့ အစားလည်းမလျှော့နိုင် ၀၀ကစ်ကစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့် bodyကိုလည်းမကျေနပ်နိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အများအမြင်မှာ ပိန်တယ်လို့ထင်ရအောင် အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်နာထားပါ ၀မှန်းသိသာစေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ခါးအနေအထားကို အဆင်ပြေဆုံးချုပ်ပေးနိုင်မယ့် ဒီဇိုင်နာ၊အပ်ချုပ်ဆရာရှိဖို့လိုပါတယ်။ ready made အ၀တ်အစားထက် ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအတိုင်း ချုပ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားမျိုးကိုပဲဝတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်နာထားဖို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂)Jeans ၀တ်ပါ ဂျင်းနဲ့ မလိုက်တဲ့သူမရှိသလောက်ပါပဲ။ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းကို ခဏမေ့ထားလိုက်ပါ။ခန္ဓာကိုယ် ၀နေလို့ သာမန် ၀တ်နေကျဒီဇိုင်းတွေကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ သင့်အနေနဲ့ ဂျင်းရဲ့ စတိုင်အသစ်ကြောင့် ပိန်တယ်လို့ ထင်ရမှာပါ။ အထူးသတိထားရမှာက ဂျင်းကို အရောင်ရင့်၊အရောင်ငြိမ်တာမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဖို့လိုသလို ဇစ်တွေရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးမရွေးချယ်မိဖို့တော့လိုပါတယ်။ (၃)ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကျေနပ်စွာလက်ခံပါ ၀တဲ့သူတွေက သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိသင့်တဲ့အနေတော် အချိုးအစားထက် ပိုများနေပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ခန္ဓာကိုယ် […]
ကိုယ့်ကိုယ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ သိသာပါတယ်၊ သင့်အတွက် သူဟာ တစ်မူထူးခြားနေတတ်ပြီး သူ့ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကို သင်က စတင်သတိထားမိရာက သံယောဇဉ်ဖြစ်တယ်၊ ထိုမှ တစ်ဆင့် အချစ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပေါင်းကူးကာ လက်တွဲလျှောက်လမ်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ အဲဒီလိုပဲ ချစ်သူနှစ်ဦး ပြတ် ဆဲတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ရှေးဦးနမိတ်ကလေးတွေ ပြလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို သိသိသာသာ ပြတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကို လေ့လာနိုင်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. စကားပြောရတာ အဆင်မပြေတော့။ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ သဘောမှာ အရာရာကို စတင်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲပြီဆိုရင် စကားပြောရတာက အစ အဆင်မပြေတော့ပါ ဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြဿနာ ဘယ်လိုရှာရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာမို့ ပြောသမျှ စကား တိုင်းမှာ […]
( ၁) သူမ သည် ဗိုက်ဆာ နေတတ် ပါသည် အစားအစာ စားလျှင် မတားမြစ်သင့်ပါ ။ ( ၂ ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် တွင် သူမ ၏ ပြောင်းလဲမှု များကို အပြစ် မရှာ ပါနှင့် ( ၃ ) ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး ၏ ဦးနှောက် သည် စိတ်ကူး ယဉ်ဆန်နေတတ်၏ * ကြင်နာစွာ ဆက်ဆံပါ ဥပမာ ပစ္စည်းများ ဘယ်နေရာ ထားသည် ကို မေ့လျော့ တတ်ပါသည် ။ မသိသယောင် ဖြစ်နေတတ်၏ ဒီအတွက် စိတ်မပူ ပါနဲ့ ကလေးမွေး ပြီးသည့် အခါ ဦးနှောက်စွမ်းရည် သည် ပုံမှန် […]
၁ – ရုပ်ရင့်ခြင်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ သွေးကြောကျဉ်းစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုမကောင်းတာကြောင့် သင့်အသားအရေညစ်နွမ်းပြီး နဂိုရှိရင်းစွဲထက် ရုပ်ကပိုရင့်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကို တစ်လလောက်ဖြတ်ကြည့်လိုက်ရင် သင့်အသားအရေက သိသိသာသာ ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ၂ – သွား နီကိုတင်းကြောင့် သင့်သွားတွေဟာ ဝါထိန်နေရပါတယ်။ ၃ – ဆံပင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက သင့်ဆံပင်တွေကိုလည်း ပါးစေပါတယ်။ ပါးရုံတင်မကဘဲ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူတာတွေပါ ဖြစ်လာပါမယ်။ ဆံပင်တွေကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ၄ – အနာရွတ် အနာရွတ်တွေဟာ တော်ရုံနဲ့ မှိန်ဖျော့ပျောက်ကွယ် မသွားတော့ပါဘူး။ လိုအပ်နေတဲ့တစ်ရှုးတွေဆီ သွေးကြောတွေက အောက်ဆီဂျင်ကို လုံလုံလောက်လောက်မပို့နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Photos & Source: Lifehack Duwun
၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ 1. ရာသီသွေးဆင်းပြီး (၇) ရက်အတွင်း ကလေးမရနှိင်ဘူး 2. အသက်ငယ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတာနှင့် Feeling ကွာခြားမှု ရှိပါသလား 3. သူနဲ့ နေတဲ့အခါတိုင်းမှာ အရမ်း တက်ကြွနေပြီး 4. အဲတာ G-spot ဖြစ်နှိင်မလား 5. သားအိမ်များ ကျနေပါသလား 6. ကလေးရရှိခြင်း မရှိသေးပါ 7. ကြော်ငြာထားတဲ့ ဆေးတွေ သောက်ရင် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါ 8. I haveaproblem when having sex with my husband Q 1: ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်အပြီးမှာ ၄ ရက်လောက်တော့ အမျိုးသမီးက ရာသီသွေးဆင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် သိတာက […]
ဆဲလ်ဖုန်းတွေကို ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်အတွင်း ထည့်ထားတတ်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းမွန်ဘူးလို့ အများစုက ယေဘုယျသိထားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်တစ်ခုကို သုတေသီတွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသား အင်္ဂါနဲ့ နီးကပ်တဲ့နေရာမှာ ဆဲလ်ဖုန်းတွေကို ထားခြင်းအားဖြင့် သုတ်ပိုးလျော့နည်းမှုကို သေချာပေါက်ဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းကိုဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်လေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ သုတ်ပိုးဟာ မျိုးအောင်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်းယူဆထားတာကတော့ ဖုန်းနဲ့ တာဝါတိုင်တွေအကြား ဆွဲငင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရေဒီယိုသံလိုက်ဓာတ်တွေဟာ သုတ်ပိုးတွေရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို နှောက်ယှက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး နည်းလမ်းတကျရှင်းပြနိုင်ဖို့ သုတေသီတွေကြိုးစားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျမှရှိတဲ့ နယူးကာဆယ်တက္ကသိုလ်က ဒီလေ့လာမှုကို ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သုတ်ပိုးနမူနာပေါင်း ၁၄၉၂ ခုကို စမ်းသပ်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် နောင်ဖြစ်လာမယ့် […]
၀ိတ်မတက်စေဘဲ ဗီတာမင် ဒီ ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့အစားအစာ (၇) မျိုး
လူအတော်များများဟာ အခြားဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို လုံလောက်အောင် စားသောက်နေထိုင်ကြပေမဲ့ ဗီတာမင်ဒီကိုတော့ မေ့ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းပဲ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ ဗီတာမင် ဒီ ချို့တဲ့တာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီ မလုံလောက်တဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလွန်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ ဆီးချိုနဲ့ ကင်ဆာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီ ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေထဲကမှ ဝိတ်မတက်စေဘဲ ဗီတာမင် ဒီ ဖြည့်စွက်ပေးမယ့် အစားအစာတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ဆယ်လ်မွန်ငါး ညစာအဖြစ် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် စားပါ။ ဆယ်လ်မွန်မှာ ပါဝင်တဲ့ omega –3ဖက်တီးအက်ဆစ်က ဗီတာမင်ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ကွေကာ မနက်စာမှာ ကွေကာကို ထည့်စားပေးသင့်ပါတယ်။ ၃။ မှို မှိုအမျိုးမျိုး စားသုံးခြင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဗီတာဗင် ဒီ […]